वीपीपछि देशको चिन्ता लिने र भिजन भएको नेता बाबुराम -बाँकि अधिकाम्स सत्ता केन्द्रित | BikalpaNews.com- the most popular online magazine of Nepal
Home विचार वीपीपछि देशको चिन्ता लिने र भिजन भएको नेता बाबुराम -बाँकि अधिकाम्स सत्ता केन्द्रित
बास्तवमा अहिलेसम्मको परिस्थिति र घटनाक्रम हेर्दा सबै पदोलुप , सत्ता र शक्तिको लागि जे सुकै गर्ने नेता देखिए तर बाबुराम भट्टराई आफ्नै पार्टीलाइ नाफुटाइ एक्लिएर नया शक्तिको निर्माणमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्री बन्दा आफ्नै पार्टी देखि सबैतिरबाट घेराबन्दि खेपेर शान्ति प्रक्रिया टुंगयाए भने उनको जोडदार माग संबिधान सभाको चुनाव र संबिधान बनेको छ । एक व्यक्ति जसप्रति धेरै आस गरियो जुनकुरा बहुमतपनि नभएको सरकार हाँकेर पुरा गर्नु भट्टराइलाई सम्भव थिएन। चरम असहयोग गरि उनको सरकार गिराएर र पहिलो संबिधानसभा भंग गराइयो र सम्पुर्ण दोस उनलाईदिने कोसिस भए तर समयले बिस्तारै प्रमणित गरिदियो उनि अन्तिन्सम्म संबिधान बनाउन चान्थे । बाबुराम भट्टराईको कर्यकालमा अर्थ सचिब भएर काम गर्नु भएका सदाचारी राष्ट्र भक्त भनिएर चिनिनु भएका रामेश्वर खनालले गर्नुभएको टिप्पणी
आर्थिक विश्लेषकसमेत रहेका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले वीपी कोइरालापछि डा. बाबुराम भट्टराईलाई आफूले भिजन भएको नेताका रुपमा पाएको बताएका छन् । वीपी र बाबुरामबाहेक अन्य प्रधानमन्त्रीहरुमा आफूले भिजन नदेखेको खनालको तर्क छ । नेपालमा लोकतन्त्रको पुनस्थापनापछि पनि किन विकासले फड्को मार्न सकेन भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्ने क्रममा खनालले नेपालमा सिंगापुर र दक्षिण कोरियामाजस्तो ‘भिजनरी’ नेतृत्वको खााचो औंल्याए । चाहने हो भने प्रधानमन्त्रीले देशमा कायापलट गर्न सक्ने खनाल बताउँछन् ।
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा गम्भीरता पनि छैन । सोच पनि छैन । ठूलो खडेरी के हो भने सोच नै छैन । पाँच-पाँच पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले म कुनै दिन बिरामी परौंला, मेरो उपचार गर्नका निम्ति भए पनि राम्रो अस्पताल चाहिन्छ भन्ने मात्रै सोच लिएको भए पनि पुग्थ्यो । त्यही भिजन भएको भए पुग्थ्यो । नेपालमा ‘टर्न एराउण्ड’ एक व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्छ । तर, हामी कहाँ नेतृत्वमा भिजन नहुनु ठूलो समस्या हो ।
नेपालमा ‘टर्न एराउण्ड’ एक व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्छ । विश्वमा जुन देशको ‘टर्न एराउण्ड’ भएको छ, त्यो देशमा आइन्स्टाइन वा कुनै ठूलो वैज्ञानिक जन्मिएका कारणले टर्न एराउण्ड भएको होइन । चीनमा तेङ स्याओ पिङ पावरमा आउँदा माओका पालाका राजनीतिज्ञहरु पनि त्यहीँ थिए । चाटुकारहरु । उनले भिजन लिए र मलाई यो चाहिन्छ, भने । इफ यु कान्ट डेलिभरी, तपाई जानुस्, म अर्को ल्याउँछु ।
हामी कहाँ नेतृत्वमा भिजन नहुनु ठूलो समस्या हो । यो समस्याबाट हामी अझै केही वर्ष गुज्रन्छौं । किनभने, भिजनरी मान्छे देखिएका छैनन् । कुनै दलको गर्भमा लुकेर बसेको होला । जसलाई हामीले अहिले भिजनरी होला कि भनेका छौं, गगन थापा, गोकर्ण विष्टहरु । बाहिर बस्दा पो भिजनरी देखिएको हो, पदमा बस्दा हुनुपर्यो नि । पदमा गएर ड्राइभ गर्न सक्ने हुनुपर्छ । धेरै प्रधानमन्त्रीहरु पदमा गएपछि सानो कुरा गर्नुबाहेक ठूलो कुरा गर्ने क्षमता छैन । राजनीतिक भिजनले समाजको व्यवहारमा परिर्वतन ल्यायो भने विकास पनि तीव्र गतिले अघि बढ्छ । विकास भएपछि समानता आउँछ । आजको मितिसम्म पनि ४० प्रतिशत घरहरुमा शौचालय छैन । सही तरिकाले हाम्रो दिशा पिसाबलाई व्यपस्थापन गर्नुपर्छ, यो भयो भने हाम्रो स्वाथ्य राम्रो हुन्छ, हामीलाई रोग लाग्दैन भन्ने सन्देशसमेत पुर्याउन सकेका छैनौं । यो हाम्रो समाजको संरचनात्कगत समस्या हो । त्यो वर्गको मान्छे र अत्याधुनिक सेवा सुविधा प्रयोग गर्न जान्ने मान्छेको आर्थिक हैसियत पनि फरक हुन्छ । किनभने यसको उत्पादकत्व बढी हुन्छ । अर्कोको कम हुन्छ किनकि उसले त एक महिना झापाडखाला लागेर काम गर्न सक्दैन ।
हाम्रो समाजमा परम्परागत र आदिम युगीन बस्तीहरु भएका ठाउँ अझै पनि छन् । ०४६ सालसम्म कम गर्ने प्रयास गरेनौं । त्यसबेला ३६/३७ जिल्लामा सडक नै पुगेको थिएन । यो अवधिमा सक्दो प्रयास गर्दा पनि तीन जिल्लामा पुग्न सकेको छैन, गाविसको त कुरा छाडौं तर, पछिल्लो अवधिमा सदरमुकाममा नपुगे पनि गाविसहरुमा भने पुगेका छन् । जब समाज चेतनशील हुँदैन, उसले दाबी गर्न सक्दैन । विकासका लागि क्लेम पनि गर्नुपर्छ । हामीले वीचमा विकास भनेको ‘राइट्स बेस अप्रोच’ अर्थात अधिकारमा आधारित विकासको धारणा भन्यौं । जसको अधिकार हो, उसकहाँ विकास पुग्नुपर्छ भनेको हो । त्यो अधिकार दिएर कसैको निगाहले पुग्ने होइन, माग्ने हो । म कर तिर्छु भने मेरो घरको ढोकामा सडक पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अधिकार हो । हामीकहाँ त घर बनाएर बाटो पुग्दैन । किनकि घर बनाउनेले कर पनि तिरेको हुँदैन ।
कति विश्वविद्यालय बने, कति अस्पताल बने जस्ता कुराहरु क्षेत्रगत विकासको कुरा हुन् । क्षेत्रगतको छाड्नुस्, सिंगल भिजन, ब्रोड भिजन हुन्छ नि म मेरो देशलाई यस्तो बनाउँछु । उल्लु नै भएपनि राजा वीरेन्द्रले एसियाली मापदण्डमा पुर्याउँछु भनेको जस्तो । कृष्णप्रसाद भट्टराईले सिंगापुर जस्तो बनाउँछु भनेको जस्तो । त्यतिको भिजन पनि भइदिए हुन्थ्यो । त्यो केही छैन । कसैको पनि छैन । सानो कुरा गर्नुहुन्छ । अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीले कति आर्थिक सहायता बाँडेका छन्, त्यो सूची हेर्नुस् । जसले बाँड्यो त्यो प्रधानमन्त्रीको भिजन छैन भनेर बुझेहुन्छ ।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले त पैसा बाँड्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन पो सोच्नुपर्ने हो त । उसलाई किन पैसा चाहियो भन्दा उपचार गर्न हो नि । सबैलाई उपचारमा सहज पहुँच हुने अवस्था बनाउनेतिर काम सुरु गरौं न । क्यान्सर फ्री गरौं । एउटा व्यक्तिलाई सुविधा दिन प्रधानमन्त्री बन्ने होइन नि । यदि एउटा व्यक्तिलाई संकट परेका कारण सरकारले ५ लाख रुपैयाँ दिनु परेको छ भने यस्तो संकट त अरुलाई पनि परेको होला । सबैलाई संकट नआउने नीति पो सोच्ने हो । अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीले कति आर्थिक सहायता बाँडेका छन्, त्यो सूची हेर्नुस् । जसले बाँड्यो त्यो प्रधानमन्त्रीको भिजन छैन भनेर बुझेहुन्छ । नेपालमा अहिलेको समस्या भनेको दिर्घकालीन सोचको हो । राजनेताले यस्तो कुरा देख्छ, जुन कुरा आम मानिस र बुद्धिजिवीले पनि देख्न सक्दैन|
मेरो प्यारो ओखलढुंगा says:
यदि बाबुराम देश भक्त हो भने अबदेश धेरै बर्ष रहेछिन यो पक्का हो
Him Lal Kharel says:
Ramisshower gi ko bhanaema ma 100samarthan chhu. Desh lai raj neta ko shakta jarurat chha
हो हो बाबुराम जस्तो राष्ट्रभक्त मैले पनि कोही देखिन् त्यही भएर जनकपुरमा गएर हिन्दीमा भाषण गर्ने, सम्बिधान जलाउछु भन्ने, भारतले नाकाबन्दि गरेको छैन भनेर खुलेआम नै भन्ने, अङ्गिकृते मधेसीको माग पुरा गर्ने पर्छ भनेर देश टुक्राउन खोज्नेको समर्थन जनाउने नेता बाबुराम त महान नेता मधेसीहरुको पनि मधेसी नेता भारतीयहरु भन्दा पनि भारतीय महान नेता भएछन् । ल ल बधाई छ । तपाईलाई पनि बाबुरामले पार्टिको टिकट दिने भयो अव ।
Susling Magar says:
यस्तै हो नेपाल भन्ने देश को दुर्भाग्य जो राम्रो देशभक्ति हुन्छ उ नै नराम्रो हुन्छ
Baikuntha Sapkota says:
k ko vision daka ho , bharatiya dalal ko parchar, lainchour ko pani khan6yo patrika le kukur haru
उहाकाे भिजन लाई सार्वजनिक गरेर अाम जनता समक्ष पुराए पेा थाहा हुन्छ किन कुरा लुकाएर राख्ननु
Rajendra Khati Chhetri says:
हो हो बाबुराम जस्तो राष्ट्रभक्त मैले पनि कोही देखिन् त्यही भएर जनकपुरमा गएर हिन्दीमा भाषण गर्ने, सम्बिधान जलाउछु भन्ने, भारतले नाकाबन्दि गरेको छैन भनेर खुलेआम नै भन्ने, अङ्गिकृते मधेसीको माग पुरा गर्ने पर्छ भनेर देश टुक्राउन खोज्नेको समर्थन जनाउने नेता बाबुराम त महान नेता मधेसीहरुको पनि मधेसी नेता भारतीयहरु भन्दा पनि भारतीय महान नेता भएछन् । ल ल बधाई छ ।
Yog Bista says:
Mahodaya vision bhara matra hunna…implement gareko Khai ? Nepal ko executive prime minister ni bhako ho! Nepali Sarai janne, nepalko founder prithivi Narayan Shha lai ta ijot Nadine le Nepal ko value kaile bujana sakdainan mahodaya
Yagya Prasad Ghimire says:
डा. बाबुराम भट्टराईलाई भिजन भएको नेता त भन्नु भयो तर वहॉको भिजन आम जनताले थाहा पाउनु पनि त पर्यो। लामो लेख लेख्नु भयो खनाल ज्यूले तर स्पस्टरूपमा भिजन के हो त्यस बारे त लेखमा केही भेटीएन। जनतालाई पनि त बुझाई दिनुहोस न।
Right analysis. Those who wish Nepal developed should support Dr. B R Bhattarai with full confidence. But he should win the political confidence of people that he will never be Maobadi again and raise the Jatiya and kshetriya conflict.